Home Wararka Maxaa fashiliyay kulankii beelaha Mariixaan iyo Ogadeen ee lagu qabtay Uganda
Maxaa fashiliyay kulankii beelaha Mariixaan iyo Ogadeen ee lagu qabtay Uganda
Bishii hore waxa lagu qabtay dalka Uganda kulan qarsoodi ah oo la doonayay in la isugu soo dhaweeyo beelaha Mariixaan iyo Ogadeen kuwaas oo in mudo ah ay dhextiilay colaad qabiil iyo mid siyaasadeed.
Kulankaan oo abaabulkiisa lagu wargaliyay Madaxweynihii hore Farmaajo ayaa waxa hogaanka u hayay siyaasiiinta beesha Mariixaan ee ka soo jeeda Goblka Galgaduud halka Mariixaanka dega dhulka Colaada ka jirta ee Jubbaland ay iyagu ka ahaayeen ka qaybgalayaal oo kali ah.
Dhanka Ogadeen waxa shirka qayb ka ahaa siyaasiyiin iyo ganacsato intooda badan laga soo kaxeeyay dalalka Kenya iyo Soomaaliya. Sida MOL loo xaqiijiyay Madaxweyne Axmad Madoobe waa uu ka warqabay kulanka waana uu taageersanaa.
Hadaba kulanka oo sida aan horayba u soo sheegnay ay gar-wadeen ka ahaayeen shaqsiyaad ka soo jeeda Galgaduud oo ay ehel yihiin Farmaajo ayaa waxa ka biyo diiday Mariixaankii ka soo jeeday Gobolka Gedo.
Beesha Ogadeen ayaa dhankooda dareemay in loo been guuray oo beesha uu ka soo jeedo Farmaajo ay doonayeen in ay heshiis la galaan Beesha Ogadeen iyo hogaanka Axmad Madoobe iyada oo aan laga talagalin beelaha Mariixaan ee dego Gobolka Gedo kuwaas oo si toos ah ay u qusayao colaada ka jirta Gobolka Gedo.
Shirka ayaa ugu danbeeyntii ku dhamaaday fashil ka dib markii beelaha Mariixaan u kala jabeen labo garab.